Lahatsary: Taona Iray Tontolo Iray Ary Tantara 52 Samy Hafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2012 2:35 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, Français, русский, عربي, Español, Ελληνικά, македонски, English
Hitsidika firenena irery mandritra ny herintaona ilay mpanao gazety amin'ny alàlan'ny Lahatsary Maggie Padlewska, hitety firenena iray isan-kerinandro ary mitontaly 52 ireo firenena hotsidihany amin'izany. Mandritra ny fitsidihany dia haka, hamoaka ary hamokatra lahatsarin'ny fifandraisany amin'ireo vondrom-piarahamonina, fikambanana ary olona zara raha voaresaky ny mpampita vaovao izy, ary hamoaka izany ao amin'ny aterineto, mba hivoahan'ny tantaran'ireny olona tsy dia be mpahafantatra ireny ho re erak'izao tontolo izao. Ity no One Year One World (Taona Iray Tontolo Iray).
Ny One year One World dia hetsika iray hamohazana ny sain'ireo olona sy vondrom-piarahamonina miaina any amin'ny sasany amin'ireo faritra mahavariana nefa tsy be mpahafantatra avy amin'ny alàlana famokarana lahatsary mahaleotena. Ny tanjona amin'izany dia ny hanomezana fahafahana ireo vondrom-piarahamonina tsy be mpahalala hizara ny tantarany amin'izao itontolo izao, hanabe sy hanome ainga ny tanora sy ny lehibe mba hieritreritra mikasika ny fianakaviambe eran-tany, hanampy amin'ny fanotorana ny “hantsana eo amin'ny fifandraisana” amin'ny fandrakofan'ny mpampita vaovao ary hanandratra ny fandriampahalemana sy ny fahaiza-manakatra erak'izao tontolo izao.
Tonga tao an-tsain'i Padlewska ity hevitra ity rehefa nandrakitra an-dahatsary asa fitsaboana iray ho anà fokon-janatany nisintaka tamin'ny besinimaro tany Panama izy. Araka ny hazavainy anatin'ity lahatsary manaraka ity, nandritra ny diany, nahatsapa izy fa tsy ny fakàna an-dahatsary ny zavatra ataon'ity andianà mpitsabo ity ihany no tiany natao, fa te-handeha nihoatra izany izy.
Natomboka niaraka tamin'ireo vondrom-piarahamonina Embera tany Panama izany tetikasany izany. Ny Embera dia iray amin'ireo foko Kolombiana tranainy indrindra sy nentin-drazana vitsy sisy hita any Amerika Afovoany, ary vao tsy ela, nambara ho Toeram-pitsangatsanganan'ny daholobe ny tanindrazan'izy ireo izay ny ankabeazany dia ala sy kirihitra. Nidika izany fa tsy afaka nihaza intsony izy ireo, izay nidika fa very izay niantka ny sakafony sy tsy maintsy nividy sakafo avy any ivelan'ny vondrom-piarahamoniny izy ireo. Ntodika any amin'ny fizahantany ara-kolontsaina izy ireo mba ho fomba iray hahazoana vola, ary dia nanitikitika an'i Padlewska izany:
Noterena hitia ny fizahantany ve ny vahoaka Embera mba ho lalana iray hiainana aorian'ny nandraràna azy ireo tsy hihaza? Inona ireo fiantraikan'io eo amin'ny fomba fiaina sy ny fiainana ara-kolontsaina nentim-paharazan'io foko io? Araraotina va re io foko io? Ireo no sasany amin'ireo fanontaniana napetrako tamin'ny Embera Drua sy ny Embera Quera, fokon-janatany roa izay mipetraka any amin'ny tanim-panjakana amin'izao fotoana izao.
Maneho amintsika ny fomba ataon'ireo vondrom-piarahamonina ireo manoloana ity fomba fifandraisana vaovao amin'ny ivelany ity ito lahatsarin'ny fitsidihana ito, sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fomba nentim-paharazan'izy ireo:
Mikasa ny hitsidika an'i Afrika, Azia Atsimo, Eoropa Antsinanana, Azia ary Amerika Atsimo sy Afovoany i Padlewska, vantany vao vitany ny fanangonam-bolany hanatanterahany ity fandehanany mandritra ny taona iray ity.